Gevonden 333 ~ MATIU, MAK, LUK, JỌN, ỌLU OZI, ROM, 1 KỌRINT, 2 KỌRINT, GALETIA, EFESỌS, FILIPAI, KỌLỌSI, 1 TESALỌNAIKA, 2 TESALỌNAIKA, 1 TIMỌTI, 2 TIMỌTI, TAITỌS, FAILIMON, HIBRU, JEMES, 1 PITA, 2 PITA, 1 Johannes, 2 JỌN, 3 JỌN, JUD, NKPUGHE
Nꞌotu oge ahụ kwa, olu sitere nꞌeluigwe kwuo okwu sị, “Onye a bụ Ọkpara m, nke m hụrụ nꞌanya. Ihe ya dị m ezi mma.”
Werenụ ụmụ nnụnụ dị ka ihe ịma atụ. Ha adịghị echegbu onwe ha banyere ihe oriri. Ọ dịghị mgbe ha na-akụ mkpụrụ nꞌubi ọ dịkwaghị mgbe ha na-ewe mkpụrụ nꞌubi. Ma Nna unu bi nꞌeluigwe na-azụ ha. Ọ̀ bụ na unu adịghị oke ọnụ ahịa karịa ha?
Ma onye ọ bụla jụrụ m nꞌihu mmadụ nile, mụ onwe m ga-ajụkwa ya nꞌihu Nna m bi nꞌeluigwe.
Jisọs zara sị ha, “Ihe unu maara nke ọma bụ nanị ịkọwa ihu eluigwe. Nꞌanyasị unu na-sị, ‘Mmiri agaghị ezo nꞌihi na ihu eluigwe na-acha uhie uhie.’
Nꞌezie, asị m unu, na ihe ọ bụla unu kere agbụ nꞌụwa, e keela ya rị agbụ nꞌeluigwe. Ihe ọ bụla kwa unu tọpụrụ, a tọpụkwala ya rị nꞌeluigwe.
Otu a ka Nna m bi nꞌeluigwe ga-emekwa unu, ma ọ bụrụ na unu agbagharaghị ụmụnne unu.”
Unu akpọkwala onye ọ bụla nꞌụwa a Nna, nꞌihi na ọ bụ nanị Chineke dị nꞌeluigwe ka unu nwere dị ka Nna unu.
Mgbe mmadụ jikwa eluigwe ṅụọ iyi, ọ bụ ocheeze Chineke na onye nọdụrụ nꞌelu ocheeze ahụ ka o ji ṅụọ iyi.
Nꞌihi na mụ, bụ Nwa nke mmadụ, ga-abịa dị ka amụma eluigwe, nke a na-ahụ anya site nꞌọwụwa anyanwụ ruo nꞌọdịda anyanwụ.
“Ngwangwa, mgbe mkpagbu nke ụbọchị ahụ nile gabigasịrị, anyanwụ ga-agba ọchịchịrị. Ọnwa agaghị enyekwa ìhè na mbara eluigwe. Ndị nile nọ nꞌụwa ga-eru uju nꞌụbọchị ahụ, mgbe mba dị iche iche ga-ahụ m, ka m na-abịa nꞌike na ebube, site nꞌime igwe ojii nke eluigwe.
“Eluigwe na ụwa ga-agabiga ma okwu m nile ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi.
“A ga-eji alaeze eluigwe tụnyere akụkọ ụmụ agbọghọ iri ndị weere iheọkụ ha pụta izute onye na-alụ nwụnye ọhụrụ.
“A ga-ewerekwa alaeze eluigwe tụnyere akụkọ otu nwoke chọrọ ịga obodo ọzọ. Ọ kpọkọtara ndị ohu ya nile nye ha ego nꞌotu nꞌotu, ka ha jiri ya malite ịzụ ahịa tutuu ruo mgbe ọ ga-alọta.
Jisọs bịara ha nso, gwa ha okwu sị, “E werela ike nile dị nꞌeluigwe na nꞌelu ụwa nye m.
Jemes na Jọn ụmụ Zebedi. Jisọs nyere ha aha ọzọ, nke bụ, Ụmụ egbe eluigwe.
“Ngọzi dịrị alaeze ahụ na-abịa, alaeze nna anyị Devidi! Ka Chineke site nꞌeluigwe gọzie ya!”
“Ma ọ bụrụ na unu ajụ ịgbaghara, Nna unu bi nꞌeluigwe agaghị agbaghara unu mmehie unu.”
Kpakpando ga-esi na mbara eluigwe daa. Mbara eluigwe ga-amakwa jijiji.
“Nꞌoge ahụ, mmadụ nile, nꞌebe nile, ga-ahụ m, Nwa nke mmadụ, ka m ji ike dị ukwuu na ebube na-abịa nꞌime igwe ojii nke eluigwe.
Eluigwe na ụwa ga-agabiga ma okwu m ga-adịgide tutuu ihe nile m kwuru emezuo.
Jisọs zara sị ya, “Ee, abụ m ya. Ọ bụkwa eziokwu ka m na-agwa unu mgbe m na-asị, na unu ga-ahụ m, bụ Nwa nke mmadụ, ka m sooro Chineke nọdụ nꞌaka nri ocheeze ya nꞌeluigwe. Unu ga-ahụkwa m ka m na-abịaghachi nꞌigwe ojii nke mbara eluigwe.”
Mgbe Onyenwe anyị Jisọs gwasịrị ha okwu ndị a, e weliri ya elu, baa nꞌeluigwe, ebe ọ nọdụrụ nꞌakụkụ aka nri Chineke.
“Otuto dịrị Chineke nꞌebe kachasị elu nke eluigwe, udo nꞌelu ụwa nye ndị nile ihe ha dị Chineke mma.”
Nụrịanụ ọṅụ mgbe ihe ndị a na-adakwasị unu, teekwanụ egwu ọṅụ, nꞌihi na ụgwọ ọrụ unu ga-adị ukwuu nꞌeluigwe. Nꞌihi na ọ bụkwa otu a ka nna nna ha siri meso ndị amụma.
Emesia, Jisọs weere ogbe beredi ise na azụ abụọ ndị ahụ lelie anya nꞌeluigwe. O kelere Chineke ekele nꞌihi ha, nyawaa ha, nye ndị na-eso ụzọ ya ka ha kee ndị mmadụ ahu.
Ha pụtara nnọọ nꞌebube nke eluigwe soro Jisọs na-ekwu okwu banyere otu ọ ga-esi mezuo uche Chineke, site nꞌọnwụ nke ọ ga-anwụ na Jerusalem.
Mgbe ahụ, ha nụrụ olu si nꞌeluigwe kwuo okwu sị, “Onye a bụ Ọkpara m onye m họpụtara.”
Mgbe Jemes na Jọn hụrụ na ndị Sameria jụrụ ịnabata Jisọs, ha gwara Jisọs sị, “Onyenwe anyị, ị chọrọ ka anyị nye iwu ka ọkụ site nꞌeluigwe bịa laa ha nꞌiyi?”
Mgbe ahụ Jisọs kwuru okwu sị, “Ahụrụ m ekwensu ka o si nꞌeluigwe daa dị ka mgbe amụma na-egbu na mbara eluigwe.
Otu ụbọchị otu onye ozizi iwu bịakwutere Jisọs ịnwa ya ọnwụnwa. Ọ jụrụ ya ajụjụ sị ya: “Onye ozizi, gịnị ka mmadụ ga-eme ma ọ bụrụ na ọ chọọ iketa eluigwe?”
Ndị ọzọ nwakwara ya ọnwụnwa sị ya gosi ha ihe ịrịba ama na mbara eluigwe iji gosi na ọ bụ Onye nzọpụta.
Nꞌihi na ọ bụ nanị ndị na-amaghị Chineke na-echegbu onwe ha banyere ihe ndị a. Nna unu bi nꞌeluigwe maara na ihe ndị a dị unu mkpa.
Reenụ ihe nile unu nwere nye ndị ogbenye. Nke a ga-eme ka akpa unu, nke dị nꞌelu, ju eju. Akpa ahụ dị nꞌelu epughị epu. Akụ unu dị nꞌeluigwe enwekwaghị ike ifu efu. Onye ohi ọ bụla enwekwaghị ike ịga nꞌebe ahụ zuo ha, nla apụkwaghị iricha ha
Ndị ihu abụọ! Unu nwere ike isite nanị nꞌile anya na mbara eluigwe mata ma mmiri ọ ga-ezo, ma ọ bụ na ọkọchị ga-akọ. Ma unu enweghị ike isite nꞌihe ndị a nile na-eme nꞌanya unu ugbu a mata ihe oge a anyị nọ nꞌime ya bụ.
Jisọs zara ya sị, “Ọnụ ụzọ e si abanye nꞌeluigwe dị warara. Ya mere, gbalịsie ike ịbanye. Nꞌihi na ọtụtụ ga-achọ ịbata ma ha agaghị enwe ike ịbanye.
Ụfọdụ ndị Farisii jụrụ Jisọs ajụjụ sị ya, “Olee mgbe alaeze Chineke ga-abịa?” Jisọs zara ha sị, “Alaeze eluigwe adịghị abịa nꞌụzọ ndị mmadụ ga-eji anya ha hụ ya.
Nꞌihi na dị ka mmadụ si ahụ ìhè mgbe ọ bụla amụma eluigwe gburu na mbara eluigwe site nꞌotu ebe ruo nꞌebe ọzọ, otu a ka ndị mmadụ ga-ahụ m mgbe m ga-alọghachi.
Ma nꞌụbọchị ahụ Lọt si nꞌobodo Sodọm pụọ, Chineke sitere nꞌeluigwe wụkwasị ndị obodo ahụ ọkụ na nkume na-enwu enwu nke rechapụrụ ndị nile bi nꞌobodo ahụ, laa obodo ahụ nile nꞌiyi.
Otu onyendu ndị Juu bịakwutere Jisọs jụọ ya ajụjụ sị, “Ezi onye ozizi, gịnị ka m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na m achọọ iketa alaeze eluigwe?”
Mgbe Jisọs nụrụ ihe nwoke ahụ kwuru, ọ gara nwoke ahụ sị, “Ọ fọdụrụ nanị otu ihe i kwesịrị ime. Laa nꞌụlọ gị, ree ihe nile i nwere. Kesaa ego i retara nye ndị ogbenye. I mechaa nke a ị ga-enwe akụ nꞌeluigwe, bịa soro m.”
Ha na-eti mkpu na-asị, “Chineke gọzie eze ahụ na-abịa nꞌaha Onyenwe anyị! Ka udo dị nꞌeluigwe! Ka otuto dịkwa nꞌebe kachasị elu nke eluigwe!”
A ga-enwe ala ọma jijiji dị ukwuu. Ụnwụ na ọrịa ọjọọ dị iche iche ga-adịkwa nꞌebe dị iche iche. A ga-ahụ ihe ga-eweta egwu na mbara eluigwe na ihe ngosi dị egwu.
Ndị mmadụ ga-ada mba nꞌihi ụjọ nke ga-atụ ha maka ihe na-abịakwasị ụwa. Nꞌihi na a ga-eme ka ike nile jikọtara eluigwe maa jijiji.
Nꞌoge ahụ ndị mmadụ ga-ahụ Nwa nke mmadụ ka m ji ike na ebube dị egwu na-abịa nꞌigwe ojii nke mbara eluigwe.
Eluigwe na ụwa pụrụ ịgabiga, bụrụ ihe na-agaghị adịkwa, ma okwu m ndị a agaghị agabiga.
Ọ bụrụ na unu ekwereghị nꞌihe ndị a na-eme nꞌetiti mmadụ nꞌime ụwa, unu ga-esi aṅaa kwere ma ọ bụrụ na m agwa unu ihe banyere ihe dị nꞌeluigwe?
Ọ gwụchaala Onye nzọpụta ahụ si nꞌeluigwe rịdata. Ọ bụkwa mụ onwe m bụ ya. Ọ bụkwa m ga-alaghachi azụ nꞌeluigwe.
E mere ka ikpe Chineke ma ha, nꞌihi na ha hụrụ ọchịchịrị nꞌanya karịa ìhè nke si nꞌeluigwe bịa. Nꞌihi na ha bụkwa ndị na-eme ihe ọjọọ dị iche iche.
Ma Jọn kọwaara ha sị, “Nanị Chineke na-esi nꞌeluigwe kenye onye ọ bụla ọrụ nke ọ na-aghaghị ịrụ.
“Onye ahụ si nꞌelu bịa dị ukwuu karịa onye ọ bụla. Onye a mụrụ nꞌụwa bụ mmadụ efu, okwu ya nile bụkwa okwu gbasara ihe dị nꞌụwa. Ma Onye ahụ si nꞌeluigwe bịa dị elu nke ukwuu karịa onye ọ bụla.
Nna anyị ha riri mana mgbe ha jegharịrị nꞌọzara. Nꞌihi na akwụkwọ nsọ kwuru sị, ‘O si nꞌeluigwe nye ha achịcha ha riri.’ ”
Ọ gwakwara ha sị, “Gịnị ka unu ga-ekwu mgbe unu ga-ahụ Nwa nke mmadụ ka ọ na-alaghachi nꞌeluigwe?
Nꞌoge ahụ, ndị na-eso ụzọ ya aghọtaghị na Jisọs na-emezu ihe e dere nꞌakwụkwọ nsọ. Ọ bụ nanị mgbe Jisọs laghachiri nꞌeluigwe, ka ha chọpụtara na ọtụtụ ihe ndị amụma dere banyere ya mezuru.
Nna m biko wetara aha gị ugwu na otuto.” Olu siri nꞌeluigwe kwuo okwu sị, “Enyela m aha m otuto. Aga m enyekwasịkwa aha m otuto ọzọ.”
Mgbe Jisọs kwusịrị okwu ndị a, o legidere anya nꞌeluigwe sị, “Nna, oge ahụ a kara aka eruola. Biko, nye Ọkpara gị otuto, ka Ọkpara gị nyekwa gị otuto.
Jisọs sịrị ya, “Emetụla m aka nꞌihi na alakwurubeghị m Nna m nꞌeluigwe. Kama gaa chọta ụmụnna m gwa ha na m na-alakwuru Nna m na Nna unu. Ana m alakwuru Chineke m na Chineke unu kwa.”
Mmadụ abụọ ndị a jụrụ ha sị, “Ndị Galili, gịnị mere unu ji guzo nꞌebe a na-ele anya nꞌeluigwe? Jisọs alaala nꞌeluigwe. Otu ụbọchị unu ga-ahụkwa ya anya ọzọ, ka ọ na-alọta dị ka unu hụrụ ya taa, ka ọ na-ala nꞌeluigwe!”
ỌLU OZI 1:21
“Nꞌihi ya, anyị ga-ahọpụta onye ọzọ nꞌọnọdụ ya. Ka ọ bụrụ otu nꞌime anyị. Ka o soro anyị gbakọọ ama banyere mbilite nꞌọnwụ Jisọs. Ka anyị site nꞌetiti anyị họpụta onye naara eso anyị na-ejegharị site na mbụ, site nꞌoge Jọn mere baptizim ya tutuu ruo nꞌụbọchị ahụ Jisọs laghachiri nꞌeluigwe.”
ỌLU OZI 2:2
Na mberede, ha nụrụ ụzụ si nꞌeluigwe. Ụzụ a dị nꞌụdị ifufe dị ike. Ụzụ ahụ jupụtara nꞌụlọ ahụ ha nọ.
ỌLU OZI 2:19
A ga-eme ka ihe ịtụnanya dị iche nke anya unu ga-ahụ mee na mbara eluigwe. Aga m arụkwa ọrụ ebube nꞌụwa. Unu ga-ahụ ọbara na ọkụ, na anwụrụ ọkụ bara ụba, dị ka igwe ojii.
ỌLU OZI 2:34
“Ọ dịghị oge Devidi jiri rigoro gaa nꞌeluigwe. Ma ya onwe ya sịrị, ‘Chineke gwara Onyenwe m, nọdụ nꞌebe a nꞌaka nri m,
ỌLU OZI 3:21
Onye nọ nꞌeluigwe ugbu a. Ebe ahụ ka ọ ga-anọgide tutuu e dozie ihe nile. Nꞌihi na otu a ka Chineke kwuru site nꞌọnụ ndị amụma ya na mgbe ochie.
ỌLU OZI 7:49
Chineke kwuru sị, ‘Eluigwe bụ ebe ocheeze m dị. Ụwa bụkwa ebe izuike nye ụkwụ m. Ụdị ụlọ dị aṅaa ka unu ga-ewu? M ga-ebi nꞌime ya? Ana m achọ ebe m ga-anọ zuo ike?
ỌLU OZI 7:50
Ọ bụghị m mere eluigwe na ụwa?’
ỌLU OZI 7:56
Ọ gwara ndị Juu ahụ okwu sị, “Lee! Ahụrụ m ka eluigwe meghere, hụkwa Jisọs Onye nzọpụta ka o guzo nꞌaka nri Chineke!”
ỌLU OZI 10:11
Ọ hụrụ ka eluigwe meghere, hụkwa efere buru ibu ka o sitere nꞌeluigwe na-arịdata nꞌebe ọ nọ.
ỌLU OZI 10:16
E mere ka Pita hụ ọhụ ahụ ugboro atọ. Ma mgbe nke a gasịrị, a napụrụ efere ahụ site nꞌebe ọ nọ, weghachikwa ya nꞌeluigwe.
ỌLU OZI 11:10
“Ihe ndị a nile mere ugboro atọ. Emesịa, e wepụrụ efere ahụ ya na ihe nile dị ya nꞌime, weghachi ya nꞌeluigwe.
ỌLU OZI 14:15
“Ndị ikom obodo a! gịnị ka unu na-achọ ime? Lee, anyị bụkwa mmadụ dị ka unu. Ọ bụ ozi ọma ka anyị wetaara unu. Anyị chọrọ ka unu site nꞌịsọpụrụ ihe ndị a na-abaghị uru, bụ nke unu na-efe site na-amaghị ama bịakwute Chineke dị ndụ. Ọ bụ Chineke kere eluigwe na ụwa, na oke osimiri na ihe nile dị nꞌime ha.
ỌLU OZI 17:24
“Chineke bụ onye kere ụwa na ihe nile dị nꞌime ya. Ebe ọ bụ onye nwe eluigwe na ụwa, ọ dịghị ebikwa nꞌụlọ e jiri aka wuo.
ỌLU OZI 22:6
“Ma mgbe m na-aga nꞌụzọ, nꞌebe dị Damaskọs nso, ìhè si nꞌeluigwe, nke na-enwụ karịa ìhè anyanwụ kpuchigidere m.
ỌLU OZI 26:13
Otu ụbọchị nꞌoge ehihie, mgbe mụ na ndị otu m na-aga nꞌụzọ Damaskọs, ìhè dị ka amụma egbe eluigwe sitere nꞌeluigwe chaa anyị gburugburu.
ỌLU OZI 26:19
“Ya mere, eze Agripa, enupụghị m isi nꞌọhụ nke eluigwe ahụ.
ỌLU OZI 27:14
Ma ọ dịghị anya ihu eluigwe gbanwere, oke ifufe bidoro na-efe. O buuru ụgbọ mmiri anyị buba ya nꞌosimiri.
ỌLU OZI 27:20
Oke ifufe ọjọọ ahụ magharịrị ọtụtụ ụbọchị na-enweghị nkwụsị. Eluigwe hujiri ehuji, anyị ahụkwaghị anwụ ma ọ bụ kpakpando ọ bụla anya tutuu ruo nꞌikpeazụ olileanya anyị nile gwụsịrị.
Nꞌihi na e sitela nꞌeluigwe mee ka iwe Chineke pụta ìhè megide mmehie na ajọ omumue nile nke ndị na-emebi iwu, ndị na-esite nꞌajọ omume ha na-eguzogide eziokwu ahụ.
Ma nzọpụta ahụ si nꞌokwukwe rute mmadụ aka adịghị ajụ ajụjụ sị, “Ònye pụrụ irigo nꞌeluigwe ịchọta Kraịst kudata ya nꞌụwa ka o nyere anyị aka?”
1 KỌRINT 1:22
Ozi ọma a bụ ihe nzuzu nye ndị Juu nꞌihi na ha chọrọ ịhụ ihe ịrịba ama na mbara eluigwe nke ga-egosi ha na ozi ọma a bụ eziokwu tupuu ha ekwere. Ọ bụ ihe nzuzu nye ndị mba ọzọ, nꞌihi na ihe ha na-anabata bụ nanị ozizi nke ya na usoro oke mmụta ha na-adakọta.
1 KỌRINT 2:7
Kama okwu anyị na-ekwusa bụ okwu amamihe, nꞌihi na o si nꞌebe Chineke nọ bịa. Ọ bụ okwu nke na-akọwa nzube zoro ezo nke Chineke, nzube ahụ Chineke zubere tupuu o kee ụwa, iwebata anyị nꞌotuto ya nꞌeluigwe.
1 KỌRINT 8:5
A sịkwa na arụsị a na-akpọ chi dị, ma ha nọ nꞌeluigwe ma ọ bụ nꞌụwa nꞌezie, ọtụtụ chi na ndị nwe mmadụ dị otu a dị.
1 KỌRINT 15:40
Ndị nọ nꞌeluigwe nwekwara anụ ahụ nke ha, nke dịkwa iche site na nke anyị ndị bi nꞌụwa. Ịma mma ha na ebube nke ndị nọ nꞌeluigwe dịkwa iche na nke ndị bi nꞌụwa.
1 KỌRINT 15:47
E si nꞌịta kee Adam nwoke mbụ, ma Kraịst, Adam nke ikpeazụ, si nꞌeluigwe bịa.
1 KỌRINT 15:48
Mmadụ nile nwere anụ ahụ dị ka Adam, nke e si nꞌịta kpụọ. Ma ndị nile bụ nke Kraịst ga-enwe ụdị anụ ahụ ahụ Kraịst nwere, anụ ahụ nke si nꞌeluigwe.
2 KỌRINT 5:1
Nꞌihi na anyị matara na mgbe anyị nwụrụ, pụọ site nꞌanụ ahụ anyị ndị a pụrụ ire ure, Chineke ga-enye anyị anụ ahụ ọzọ nke na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi nꞌeluigwe. Anụ ahụ ọ ga-enye anyị abụghị nke e ji aka mee, kama ọ bụ nke Chineke nꞌonwe ya kpụrụ.
Nꞌezie, anyị nọ ugbu a naasụ ude nꞌime anụ ahụ a anyị nwere. Ọ na-agụsikwa anyị agụụ ike ka e yikwasị anyị anụ ahụ eluigwe ahụ, nke anyị ga-eyikwasị dị ka uwe.
2 KỌRINT 5:3
Nꞌihi na mgbe e yikwasịrị anyị ụdị anụ ahụ nke eluigwe, anyị agaghị abụkwa nanị mmadụ efu.
2 KỌRINT 5:4
Mgbe ahụ nile anyị nọ nꞌime anụ ahụ nke ụwa a, anyị naanọgide nꞌịsụ ude. Ọ bụghị nꞌihi na anyị chọrọ ịnwụ anwụ bụrụ ndị naenweghị anụ ahụ, kama ọ bụ nꞌihi na anyị chọrọ ka e yikwasị anyị anụ ahụ nke eluigwe ahụ, ka anụ ahụ ahụ pụrụ ịnwụ anwụ yikwasị ndụ ebighị ebi.
2 KỌRINT 5:9
Ya mere, ma anyị nọ nꞌeluigwe, anyị na Onyenwe anyị, ma anyị nọ nꞌebe a, nꞌụwa a, uche anyị mgbe nile bụ ime ihe ga-adị ya ezi ụtọ.
Ka otuto dịrị Chineke, Onye bụ Nna Onyenwe anyị Jisọs Kraịst, nꞌihi na ọ gọziri anyị site nꞌinye anyị ngọzi nile nke eluigwe nꞌihi na anyị bụ nke Kraịst.
Nke a bụkwa ihe o zubere: Na mgbe oge ahụ ruru, ọ ga-akpọkọta ụmụ ya nile na ihe nile o kere nꞌeluigwe na nꞌụwa, ka Kraịst bụrụ isi ihe nile.
Chineke jiri kpọlite Kraịst site nꞌọnwụ, mee ya ka ọ nọdụ nꞌakụkụ aka nri ya nꞌeluigwe.
Nꞌebe ahụ ka Kraịst na-achị ndị ọchịchị nile nọ nꞌeluigwe, na ndị isi nile, na ndị nwere ike nile, na ndị nwe mmadụ nile. Ọkwa eze ya dị elu karịa ọkwa eze ndị dị ike nile nọ nꞌụwa a, na nꞌụwa ọzọ.
Onye ezinụlọ nile dị nꞌụwa a na nke dị nꞌeluigwe na-esite nꞌaka ya enwe aha.
Ka e site nꞌịkwanyere ya ugwu, mee ka ndị nile bi nꞌụwa, na ndị bi nꞌeluigwe, na ndị bi nꞌokpuru ụwa, gbuo ikpere ha nꞌala, ịsọpụrụ Jisọs mgbe ọ bụla a kpọrọ aha ya.
Ana m agbasi ọsọ ike ịga nꞌihu, iru na njedebe ebe ahụ a ga-agbaru ọsọ, ka m nwee ike inweta ihe ahụ a na-agbata nꞌọsọ, nke Chineke kwadebere inye ndị ya nꞌeluigwe, nꞌihi ọrụ zuru oke ahụ Onyenwe anyị Jisọs Kraịst rụrụ nꞌihi anyị.
Ma anyị onwe anyị ụmụnna m, eluigwe bụ ụlọ anyị, ebe Onyenwe anyị Jisọs nọ. Anyị na-elekwa anya mgbe ọ ga-esi nꞌeluigwe lọghachi.
Mgbe eziokwu ahu bụ ozi ọma rutere unu, unu nụrụ banyere olileanya dịrị ndị nabatara ya. Nꞌihi ya okwukwe unu na ịhụnaya unu na-ele anya ya, bụ ihe e chebere nke ọma nꞌihi unu nꞌeluigwe.
1 TESALỌNAIKA 1:10
Ha na-akọkwa otu unu si na-ele anya nlọghachi Okpara Chineke site nꞌeluigwe, Jisọs ahụ Chineke mere ka o si nꞌọnwụ bilie, onye bụ Onye nzọpụta anyị site nꞌiwe Chineke dị egwu megide mmehie.
1 TIMỌTI 6:15
Nꞌihi na mgbe oge ahụ ruru, Chineke onye a gọziri agọzi na onye nanị ya bụ Chineke dị ike, eze kachasị eze nile na onye kachasị ndị nwe mmadụ nile ga-eme ka Kraịst pụta ìhè site nꞌeluigwe.
1 TIMỌTI 6:19
Mgbe ha na-eme ihe ndị a ha na-akpata akụ nke ha naedebe nꞌụlọ akụ nke eluigwe. Nke a bụkwa nanị akụ anyị nwere ike ịkpado nke ga-adị ruo mgbe ebighị ebi. Ha ga-abụkwara anyị ihe ga-eme ka anyị na-ebi ndụ juru afọ nꞌụwa a.
Chineke kpọkwara Jisọs “Onyenwe anyị,” mgbe o kwuru sị “Onyenwe anyị, na mbụ ọ bụ gị kere ụwa. Eluigwe bụkwa ọrụ aka gị.
Ha ga-ala nꞌiyi bụrụ ihe efu. Ma gị onwe gị ga-anọgide ruo mgbe nile ebighị ebi. Eluigwe na ụwa ga-akacha nka dịrị ka akwa ochie,
Ya mere, ka anyị mee ka ike anyị ha, ka anyị banye nꞌebe izuike nke eluigwe, ka ọ hapụ ịdịkwa onye ọ bụla nꞌime anyị nke na-agaghị aba nꞌihi ekweghị ekwe dị ka ụmụ Izirel.
Ma anyị nwere Jisọs Ọkpara Chineke dị ka onyeisi nchụaja ukwu nke ndụ anyị. Ọ nọ ugbu a nꞌeluigwe nꞌihu Chineke. Nꞌihi nke a ka anyị jidesie okwukwe ahụ anyị kwupụtara aka ike.
Ihe anyị na-ekwu bụ nke a, anyị nwere onyeisi nchụaja dị otu a. Ọ na-anọdụkwa nꞌebe nsọpụrụ dị elu nꞌakụkụ aka nri Chineke onye dị ukwuu, nꞌeluigwe.
Jisọs na-arụkwa ọrụ ya dị ka onyeisi nchụaja nꞌebe kachasị nsọ nke eluigwe. Ọ bụkwaghị nꞌụlọ nsọ nke mmadụ jiri aka wuo, kama nꞌụlọ nsọ ahụ Chineke nꞌonwe ya wuru.
Ma ọrụ nile ndị nchụaja na-arụ bụ nanị onyinyo banyere ihe nke dị nꞌeluigwe. Ọ bụkwa nꞌihi nke a ka Chineke jiri gosi Mosisi mgbe ọ na-akwado iwuru ya ebe a ga-anọ fee ya ofufe nꞌọzara, otu ọ ga-esi wuo ụlọ ahụ. Chineke gwara ya okwu sị, “Lezie anya hụ na i mere ihe nile nꞌusoro dị ka m si gosi gị nꞌelu ugwu.”
Ma Kraịst abịalarị. Ya onwe ya bụ ezi onyeisi nchụaja nke ọnọdụ ọhụrụ ahụ anyị nwere ugbu a. Ebe ọ na-arụ ọrụ nchụaja ya abụghị nꞌụlọ mmadụ jiri aka wuo. Kama ọ bụ nꞌụlọ nchụaja zuru oke dị nꞌeluigwe.
Nke a na-ezipụta na ụlọ ikwu ahụ na ihe nile dị nꞌime ya bụ ụdị ihe nile dị nꞌeluigwe. Nꞌihi nke a, ọ dị mkpa na ihe nile dị nꞌime ụlọ ikwu a na ụlọ ikwu nꞌonwe ya kwesịrị ka e were ọbara mee ka ha dị ọcha. Otu aka ahụ, ihe nile dị nꞌeluigwe, bụ ihe ahụ ụlọ a dị nꞌụwa yiri, ka e mere ka ha dịkarịa ọcha site nꞌịta dị oke ọnụ ahịa bụ obara Kraịst.
Nꞌihi na Kraịst abanyeghị nꞌụlọ nsọ dị nꞌụwa, nke mmadụ wuru. Kama o rigooro nꞌeluigwe ebe ọ nọ ugbu a na-ekwuchitere anyị ọnụ anyị nꞌihu Chineke nꞌonwe ya.
Noa bụ otu onye nꞌime ndị nwere okwukwe na Chineke. Chineke dọrọ Noa aka na ntị banyere ihe gaje ime. Noa kweere. Ọ bụ ezie na otu mkpụrụ igwe ojii adịghị nꞌeluigwe, ma na-atụfughị mgbe, Noa wuru ụgbọ mmiri o ji zọpụta onwe ya na ndị ezinụlọ ya. Okwukwe Noa adịghị ka nke ndị ọzọ nọ nꞌụwa nꞌoge ahụ. Ya mere, Noa sitere nꞌokwukwe bụrụ onye nketa alaeze Chineke.
Site nꞌotu nwa a Eberaham ghọrọ nna mba dị ukwuu. Ndị mmadụ chere na Eberaham na Sera emeela agadi ịmụta nwa. Ma taa, site nꞌotu nwoke a bụ Eberaham e nwere ụmụ ụmụ ya dị ukwuu dị ka kpakpando eluigwe. Ha dị ukwuu dị ka aja dị nꞌakụkụ osimiri.
Nꞌezie, ndị a nile gụrụ onwe ha dị ka ndị ọbịa nꞌụwa lere anya ala ọzọ. Ha na-ejikere maka ụlọ ha dị nꞌeluigwe.
Nꞌihi nke a, ha achọghị ile anya nꞌazụ nꞌihe ụwa ha hapụrụ. Ha gaara alaghachi azụ ịchọ ọganihu ụwa. Ma ha dabeere na-ele anya ngọzi sị nꞌeluigwe nke Chineke na-enye.
1 PITA 1:4
Chineke akwadobela onyinye ndụ ebighị ebi ọ ga-enye ụmụ ya nile. Onyinye a dị nꞌeluigwe ebe Chineke na-echebe ya. Nꞌebe ahụ ọ gaghị emebi emebi, ọ gakwaghị agbanwe ọdịdị ya ma ọ bụkwanụ ree ure.
2 PITA 3:5
Ma ndị na-ekwu ụdị okwu a kpachaara anya chefuo na Chineke onye sitere nꞌokwu ọnụ ya kee eluigwe na ụwa, bụkwa onye mere ka e jiri mmiri dị ukwuu laa ụwa mbụ ahụ nꞌiyi nꞌoge gara aga. Ọ bụ otu Chineke ahụ mere ka e sitekwa na mmiri kpụpụta ala akọrọ na ihe nile gbara ya gburugburu.
2 PITA 3:7
Ọ bụkwa otu okwu ọnụ Chineke ahụ ka e ji nye iwu ka e chebe eluigwe na ụwa tutuu ruo ụbọchị ikpe ahụ, mgbe a ga-eji ọkụ laa ha nꞌiyi nꞌụbọchị ahụ a ga-ekpe ndị nile na-amaghị Chineke ikpe, laakwa ha nꞌiyi.
Ma ụbọchị ahụ Onyenwe anyị kwadobere ga-abịa mgbe anyị na-eleghị anya ya. Nꞌụbọchị ahụ, eluigwe ga-eji oke ụzụ gafee. Ihe nile dị nꞌeluigwe ga-agba ọkụ, laa nꞌiyi. Ụwa na ihe nile dị nꞌime ya ka ọkụ ga-erepịakwa nꞌotu ntabi anya.
mgbe anyị nọ na-ele anya ọbịbịa nke oke ụbọchị ahụ? Gbalịsiekwanụ ike isite na ndụ unu mee ka ụbọchị ahụ bịa ngwangwa, ụbọchị ahụ Chineke ga-eji ọkụ repịa eluigwe, mee ka ihe nile dị nꞌeluigwe gbazee bụrụ ihe na-agaghị adịkwa.
“Ma onye ọ bụla na-emeri emeri ka m ga-eme ka ọ bụrụ onyeisi nꞌime ụlọ nsọ Chineke m. A ga-ekpuchi ya nke ọma nꞌụzọ zuru oke. Ọ gaghị apụkwa apụ. Aga m edekwasịkwa aha Chineke m nꞌahụ ya. Ọ ga-ebikwa nꞌime obodo nsọ Chineke m, nke bụ obodo Jerusalem ọhụrụ ahụ si nꞌeluigwe rịdata. Aha ọhụrụ m ka a ga-edekwasịkwa nꞌihu ya.
Mgbe ihe ndị a gasịrị, eleliri m anya m elu hụ ọnụ ụzọ eluigwe ka e meghere ya. Ụda olu ahụ m nụrụ na mmalite dara ụda ọzọ, dị ka ụda opi ike sị m, “Bịa nꞌebe a ka m gosi gị ihe gaje ime nꞌoge dị nꞌihu.”
Ma ọ dịghị onye ọ bụla e nyere ike imeghepụ akwụkwọ ahụ nꞌime eluigwe ma ọ bụ nꞌime ụwa, ma ọ bụ site nꞌokpuru ụwa. O nweghị onye e nyere ike ịgụpụta ihe e dere nꞌime akwụkwọ ahụ.
Mgbe m nọ na-elegide ya anya, Nwa atụrụ ahụ nyakapụrụ akara nke mbụ dị nꞌakwụkwọ ahụ. Otu nꞌime ihe e kere eke anọ ahụ tiri mkpu dị ka a ga-asị na ọ bụ olu egbe eluigwe dara, gwa m okwu sị m, “Bịa”.
Mgbe ahụ, kpakpando dị na mbara eluigwe malitere ịdapụ nꞌala dị ka mkpụrụ osisi na-achaghị acha si adapụ mgbe oke ifufe na-efe.
Otu a, mbara eluigwe ahụ nke kpakpando jupụtara adịkwaghị, dị ka a ga-asị na a pịakọtara ya dị ka ute, wepụ ya. Ugwu nta nile na ugwu ukwu nile, na agwa etiti nile makwara jijiji, site nꞌọnọdụ ha wezuga onwe ha.
Mgbe Nwa atụrụ ahụ nyakapụrụ akara nke asaa ahụ, akụkụ nile nke eluigwe dara jụụ ruo ihe dị ka iri nkeji atọ. Ọ dịkwaghị mkpọtụ ọ bụla dị site nꞌihe ọ bụla Chineke kere.
Mgbe m chọrọ idetu ihe egbe eluigwe ndị a kwuru, anụrụ m otu olu si nꞌeluigwe kpọọ m sị m, “Edela ihe ahụ nꞌakwụkwọ, nꞌihi na achọghị ka ndị ọzọ mata okwu ahụ egbe eluigwe ndị ahụ kwuru.”
were onye ahụ na-anọkwasị nꞌocheeze ahụ ṅụọ iyi. Ya bụ onye ahụ kere eluigwe na ụwa, na ihe nile dị nꞌime ha, na oke osimiri, na ndị nile bi nꞌime ha, sị na oge ezuola. Na o kwesịkwaghị ka a tụfuo oge ọ bụla.
Mgbe ahụ otu olu dị ukwuu ga-esi nꞌeluigwe tie mkpu gwa mmadụ abụọ ahụ okwu sị, “Bilienụ, rigota nꞌelu.” A ga-ewelite ha elu na mbara eluigwe baa nꞌime igwe ojii. Ma ndị iro ha ga-anọ na-ele ha anya ka ha na-arigo nꞌeluigwe.
Ma nꞌotu oge ahụ, nꞌotu awa ahụ, ala ọma jijiji dịkarịsịrị oke egwu ga-adị, nke ga-eme ka otu akụkụ nꞌime akụkụ iri nke obodo ahụ nile daa. Ndị ga-anwụ nꞌoge ala ọma jijiji a ga-adịkwa puku mmadụ asaa. Ma ndị nile fọdụrụ ga-esite nꞌoke egwu ga-atụ ha nye Chineke nke eluigwe otuto.
Mgbe ahụ kwa e meghere ụlọ nsọ Chineke nke dị nꞌeluigwe. Ahụkwara m igbe ọgbụgba ndụ Chineke nꞌime ya. Nꞌotu oge ahụ kwa, egbe eluigwe malitere ịgba, amụma gbukwara. Oke ifufe nke na-ala ihe nꞌiyi bidokwara ife. Oke ala ọma jijiji dị egwu bidoro nꞌebe dị iche iche, mee ka ụwa nile mee mkpọtụ nke ukwuu.
Mgbe ihe ndị a gasịrị, oke ihe ịrịba ama pụtara ìhè nꞌeluigwe nke na-egosi ihe gaje ime. Ahụrụ m otu nwanyị e yikwasịrị anyanwụ dị ka uwe. Ọnwa dịkwa nꞌokpuru ụkwụ ya abụọ. Okpu eze nke kpakpando iri na abụọ dị gburugburu ya, dịkwa ya nꞌisi.
Nꞌazụ ya, o nwere ọdụdụ nke o ji dọkpụrụ otu ụzọ nꞌime ụzọ atọ nke kpakpando nile dị nꞌeluigwe, tụda ha nꞌala. Ọ bịara guzo nꞌihu nwanyị ahụ mgbe ọ na-achọ ịmụpụta nwa ahụ ọ dị ime ya, nọọ na njikere iri nwantakịrị ahụ nwanyị ahụ ga-amụpụta.
Emesịa, nwanyị ahụ mụpụtara nwantakịrị ahụ, onye gaje ịchị achị nꞌelu ụwa dum. Onye ga-ejikwa aka dị ike chịa ọchịchị ya. Mgbe ahụ a mụpụtara ya, nꞌotu oge ahụ kwa, e si nꞌebe ahụ wepụ nwanta ahụ were ya gaa nꞌebe Chineke nọ nꞌeluigwe nꞌocheeze ya.
Mgbe a lụchara ọgụ a, e meriri agwọ ochie ahụ nꞌagha, chụpụ ya site nꞌeluigwe.
Mgbe ahụ anụrụ m oke olu si nꞌeluigwe na-ada sị, “O mezuola nꞌikpeazụ, nzọpụta Chineke na ike na ọchịchị na ịchị isi Kraịst, ha abụrụla ihe dị ire nꞌihi na e sitela nꞌeluigwe chụtuo onye ahụ na-ebo ụmụnna anyị ebubo. Ọ na-ebo ha ebubo ehihie na abalị nꞌihu Chineke anyị.
Nꞌime afọ atọ na ọnwa isii ndị a anụ ọhia ahụ kwuluru aha Chineke na ụlọ nsọ ya na ndị nile bi nꞌeluigwe.
Anụ ọhia a si nꞌime ala pụta rụrụ ọtụtụ ọrụ ịtụ nꞌanya dị iche iche. O mere ka ọkụ si na mbara eluigwe daa nꞌụwa nꞌihu mmadụ nile.
Anụkwara m olu si nꞌeluigwe na-ada. Olu a na-ada ụda dị ka ụda mmiri si nꞌime nkume na-asọpụta, ma ọ bụ dị ka ụda nke oke egbe eluigwe. Olu a bụ olu ndị na-abụ abụ, ndị ji ụbọ akwara na-abụ abụ.
Mgbe m lere anya ahụrụ m na e megheela ebe nsọ kachasị ebe nsọ nke ụlọ nsọ ukwu ahụ dị nꞌeluigwe.
Ha kọchara Chineke nke eluigwe nꞌihi ihe ụfụ na ọnya bịakwasịrị ha. Ma ha jụrụ ichegharị site nꞌajọ ọrụ ha nile.
Mgbe ahụ egbe eluigwe bidoro na-agba na-eme mkpọtụ, amụma bidokwara na-egbu, oke ala ọma jijiji dịkwara nꞌụwa, ụdị nke na-adịbeghị site na mgbe e kere ụwa. Ọ bụ ala ọma jijiji kachasị ala ọma jijiji ndị ọzọ njọ.
Mkpụrụ mmiri nke ịdị arọ otu nꞌime ha ruru iri kilogram ise, sitere nꞌeluigwe na-adakwasị ndị mmadụ. Nke a mekwara ka ha kọchaa Chineke nꞌihi ihe otiti mkpụrụ mmiri ahụ, nꞌihi na ihe otiti ahụ dị nnọọ njọ nke ukwuu.
Mgbe ahụ anụkwara m olu ọzọ si nꞌeluigwe na-akpọ oku na-asị, “Ndị m, sitenụ nꞌobodo ahụ pụta, unu esola ya keta oke na mmehie ya, nꞌihi na a ghaghị ịta unu ahụhụ ma unu soro ya mehie.
Nꞌihi na mmehie ya amụbaala ruo eluigwe. Chineke ejikerekwala ikpe ya ikpe nꞌihi ajọ omume ya.
“Ma gị eluigwe ṅụrịa ọṅụ nꞌihi ihe a dakwasịrị obodo a, unu ụmụ Chineke, na unu ndị amụma ya na ndị ozi, ṅụrịakwanụ ọṅụ. Nꞌihi na Chineke ekpeela obodo a ikpe nꞌoge ikpeazụ a.”
Mgbe ihe ndị a gasịrị, anụrụ m ụzụ nke ọtụtụ igwe mmadụ nꞌeluigwe. Ha nile na-eti mkpu na-asị, “Haleluya, keleenụ Onyenwe anyị. Ọ bụ nꞌaka Chineke anyị ka nzọpụta si bịa, ọ bụkwa nanị ya ka nsọpụrụ na ike nile dịrị.
Mgbe ahụ, anụkwara m ihe yiri ụzụ nke ọtụtụ ndị mmadụ. Nꞌezie, ụzụ a dara dị ka ụzụ nke mmadụ na-anụ mgbe ebili mmiri na-amagharị nꞌoke osimiri. Ọ dakwara dị ka ụzụ nke egbe eluigwe. Ma ihe ndị na-eme ụzụ a na-eti mkpu na-ekwu bụ, “Toonụ Onyenwe anyị. Nꞌihi na Onyenwe anyị Chineke anyị na-achị achị ugbu a.
Ụsụ ndị agha nke eluigwe, ndị yi uwe dị nnọọ ezi ọcha, nke na-enwụkwa enwụ, na-esokwa ya nꞌazụ. Ha nọkwasịrị nꞌelu inyinya na-acha ọcha.
Ndị agha ha nile ka e jikwa mma agha dị nkọ, nke dị nꞌọnụ onye ahụ nọ nꞌelu inyinya ọcha ahụ gbuo. Ụmụ anụ ufe nile nke eluigwe rikwara ozu ha dị ka ha nwere ike iri.
Ha nile ga-esi nꞌakụkụ nile nke ụwa zukọọ, gbaa obodo ndị Chineke gburugburu, ya bụ obodo Jerusalem ahụ Chineke hụrụ nꞌanya. Ma Chineke ga-eme ka ọkụ si nꞌeluigwe daa dakwasị ha, repịa ndị agha ahụ nile.
Ahụkwara m otu ocheeze ọcha buru ibu, nke otu onye nọkwasịrị nꞌelu ya. Mgbe ụwa na mbara eluigwe nile hụrụ onye a nọ nꞌelu ocheeze ahụ ha gbara barịị fuo. Ma ha achọtaghị ebe ha ga-ezo onwe ha.
Mgbe ahụ elere m anya hụ elu ụwa ọhụrụ nke osimiri na-adịghị nꞌime ya, na mbara eluigwe ọhụrụ, nꞌihi na elu ụwa mbụ na mbara eluigwe mbụ ahụ, bụ ndị dị ugbu a, adịkwaghị.
Mụ onwe m bụ Jọn hụkwara obodo nsọ ahụ bụ Jerusalem ọhụrụ ka o si nꞌeluigwe ebe Chineke nọ na-arịdata. Ọ bụ ihe dị ebube ma e lee ya anya. Ọ mara mma dị ka nwagbọghọ e jikwara nke ọma maka ịgba akwụkwọ ya.